रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के खाने ? के नखाने ? - DonNepal
४ पुष २०७७, शनिबार १०:२४ DON	0 Comments
?भिटामिन ‘सी’को राम्रो स्रोत हो, कागती । कागतीका साथै सुन्तला, अंगुर पनि भिटामिन ‘सी’ तथा एन्टीअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो। भिटामिन ‘सी’ ले सेतो रक्तकोषिका उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ, जसले संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्छ।नेपालीहरूमाझ चिया लोकप्रिय छ। चियामा पनि कालो चिया तथा ग्रीन टी धेरैको रोजाइमा पर्ने गर्छ । ग्रीन टी तथा कालो चियामा पर्याप्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व रहेको हुन्छ, जसको सेवनले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ।
तरकारीको सूचीमा ब्रोकउलीलाई निकै स्वास्थ्यकर मानिन्छ । जसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पोषणतत्वको प्रवाह गर्छ। यसमा फाइबर तथा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वका साथै भिटामिन ए, सी, तथा डी पाइन्छ । त्यसैले खानामा काँचो वा हल्का पाकेको ब्रोकाउलीलाई समावेश गरेर पनि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सकिन्छ ।हरिया सागसब्जीहरूमा पनि पालुङ्गोलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । पालुङ्गोमा क्यारोटिन, एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वका साथै भिटामिन सी पाइन्छ । पालुङ्गोले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने भिटामिन तथा पोषण तत्वको पूर्ति गर्छ ।
← इलामको गुगल डाँडामा के छ त्यस्तो जहाँ पर्यटकको अकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ! जानौ
‘काठमाडौंमा स्कुल कलेज र विवाह रोकौं’ कोरोनाको दोस्रो छाल भयंकर हुन सक्छ… →
मिर्गौला स्वस्थ राख्न यस्तो गर्नुस
७ पुष २०७७, मंगलवार १६:२० DON	0
‘धनी राष्ट्रहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप थुपार्दा गरिब राष्ट्रहरूले नपाउन सक्छन्…
३ पुष २०७७, शुक्रबार ०४:३२ DON	0
५ माघ २०७७, सोमबार ०८:०७ DON	0